सेरोफेरो : प्यारी बिजुली, चाँडै आऊ
मनको रहर। घाम पनि तिमीसँगै हेर्न पाए, जून पनि सँगै देख्न पाए, कति जाती हुन्थ्यो होला? तर तिमीले बाटो बिराउँदा। मनले नचाहँदा नचाहँदै पनि। मैनबत्तीहरूसँग खुसुखुसु डेटिङ सुरु गर्नु परेको छ। उनीहरूसँग टाढा बस्न। तिमीसँगको सम्बन्ध गाढा बनाउन। तिम्रो उपस्थितिको निक्कै महत्व छ। प्यारी बिजुली, हामीले माथिल्लो तामाकोशी, त्रिशुली थ्रि 'ए', बुढीगण्डकी अनि पश्चिम सेतीमा बसेर खाएको कसम। हामी बीचको स्वच्छन्द प्रेम। के सफल होला?
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण १०, २०७० १५:२८:०५